जुन दिन तपाईंको लेख प्रकाशित भयो, त्यसै दिन विप्लव माओवादीको बन्द थियो । यो संयोग हो अथवा सन्देश ? मेरो लेख छापिनु र त्यसै दिन विप्लवको नेपाल बन्द हुनु संयोग हो । मलाई मेरो लेख कहिले छापिन्छ भन्नेसमेत थाहा थिएन । यो लेख त मैले समकालीन तीसरी दुनियाँका लागि लेखेको हुँ, जसको संक्षिप्त रूप मैले कान्तिपुरमा दिएको थिएँ । नेपालमा माओवादी घटकलाई लिएर प्रचण्डले केन्द्र गठन गर्ने जुन ठूलो नाटक गरिरहेका थिए, त्यसैको भोलिपल्ट विप्लवको आमसभा थियो । जुन दिन काठमाडौंमा आमसभा भयो, त्यसको अघिल्लो दिनको एकताको विकल्पमा त्यसलाई चुनौती दिन र हामी यस प्रक्रियालाई लत्याउँछौँ तथा यसबाट देशमा परिवर्तन हुनेवाला छैन भन्न आयोजना गरिएकोजस्तो लाग्यो ।
विप्लवको राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखेर नेतृत्वको बहस पनि हुनुपर्छजस्तो लाग्दैन ? तपाईंले यसबीच कैयौँपटक विप्लवसँग छलफल गर्नुभयो होला, के उनले यसको नेतृत्व गर्न सक्छन् ? कुनै पनि नेताको क्षमताबारे अघि नै केही भन्न सकिँदैन । साथसाथै के पनि भन्न सकिन्न भने उनको भावी रोडम्याप निकै स्पष्ट छ अथवा अस्पष्ट । किनभने मलाई राम्रो गरी के थाहा छ भने नेपालमा जब जनयुद्धको सुरुवात भयो, त्यसको एक/दुई वर्षमै मैले नेपालको कुनै पत्रिकाका लागि लामो अन्तर्वार्र्ता दिएको थिएँ । त्यस अन्तर्वार्र्तामा मैले माओवादी के गर्दै छन् भन्नेबारे थाहा नभएको तथा उनीहरूले लिएको रोडम्यापमा आफू स्पष्ट हुन नसकेको बताएको थिएँ । सायद त्यतिबेलासम्म माओवादीको रोडम्यापबारे धेरै मान्छे त्यति स्पष्ट थिएनन् । किनभने मैले नेपालका साथीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू भन्थे, ‘होइन–होइन यो त त्यसै दुई/चारजनाको लहड हो, केही दिनमा अन्त्य हुन्छ ।’ भन्नुको अर्थ यस्ता कुरा एउटा प्रक्रियामा स्पष्ट हुँदै जान्छन् ।
आन्दोलनको उठान पनि नहुने र समाजमा अन्तरविरोध पनि व्याप्त रहने जुन अवस्था देखापरेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ यस्तोखालको परिस्थिति कहिलेसम्म रहला ? जनयुद्ध सुरु हुँदा राजतन्त्र भएकाले वर्गदुस्मन स्पष्ट थियो । अहिले राजतन्त्र छैन भनेपछि नेपालसामु वर्गदुस्मन त्यसैगरी अस्पष्ट छ, जसरी भारतका माओवादीका अगाडि । जनतालाई सत्तामा बसेका तपाईंका मित्र होइनन् भनेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ, जुन सजिलो काम होइन । कल्पना गरौँ कि प्रचण्ड अथवा भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरे, जब कि यिनीहरू क्रान्तिकारी विरासत बोकेर आएका हुन् र यिनीहरूसँग जनयुद्धको ‘लिगेसी’ हुन्छ । भाषा र नारा पनि क्रान्तिकारीजस्तै हुन्छ, जसले जनतालाई मोहित पार्न सक्छ । अथवा भनौँ तिनको नारा र भाषामा ‘पपुलिजम’ र ‘रेभुलुसन’ दुवै तत्व घोलिएका हुन्छन् ।
तपाईंको लेख पढ्दा र कुरा सुन्दा के शंका हुन्छ भने तपाईंले नेपालमा जनयुद्ध–२ लड्नका लागि उत्प्रेरित गरिराख्नु भएको त छैन ? आनन्दस्वरूप वर्मा जो भारतीय हुन उनले नेपालमा सबैलाई उचालिरहेका छन् भन्ने आरोप तपाईंमाथि छ के भन्नुहुन्छ ? कुनै पनि आन्दोलन, जनयुद्धसमेत जनताको सहभागितामा हुने गर्छ । नेपाली जनतासामु संघर्षको यति लामो इतिहास छ, जसले गर्दा उनीहरू यति प्रबुद्ध भएका छन् कि कुनै एउटा पत्रकारले उचाल्दैमा उनले आन्दोलन सुरु गर्दैनन् । न त कुनै पत्रकारले दुत्कार्दैमा त्यसको अन्त्य नै गर्छन् । मेरो काम भनेको कुनै पनि कुराको प्रभाव, त्यसका आधारलाई केलाउँदै विश्लेषणमार्फत अगाडिसम्मको कुरा भन्न सक्नु हो । मेरो आँकलन÷विश्लेषण गतल पनि हुन सक्छ किनभने म कुनै भविष्यवेत्ता होइन ।
नयाँ शक्ति गठन र उडान तपाईंलाई के लाग्छ– भावी दिनहरू विप्लवको पक्षमा हुनेछन् अथवा बाबुरामको ?
त्यसो हो भने नयाँ शक्तिको राजनीतिक ‘स्पेस’ कहाँ छ ? नेपालमा वामपन्थीमात्र छैनन् । नेपालको एउटा स्थायी मध्यम वर्ग छ । एउटा उकासिँदै गरेको मध्यम वर्ग । एउटा मध्यम वर्गको आकांक्षी मध्यम वर्ग र एउटा त्यो वर्ग पनि छ, जो माक्र्सवादी हुन चाहन्थ्यो र कुनै समय माओवादीको प्रभावमा पुग्यो तर आज उसको मोहभंग भइसकेको छ । भन्नुको अर्थ माओवादी आन्दोलन जति विफल हुँदै जान्छ त्यति तीव्रतामा नयाँ शक्तिले सफलता चुम्नेछ । क्रान्तिकारीको विफलताले यसप्रकारका शक्तिलाई बढावा पुग्छ ।
आगामी चुनावमा बाबुरामले जसरी पहिलो हुने ‘प्रोजेक्सन’ गरेका छन्, तपाईं त्यसको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? मैले सम्भावना देखेको छु । किनभने नेपालका वामपन्थी जोसँग जनताले आशा गरेका थिए, भलै त्यो एमाले होस् अथवा माओवादी उनीहरूले नराम्रोगरी धक्का खाएका छन् । जब विश्वासमा धक्का लाग्छ, जनताले विकल्प खोज्छन् । त्यस अर्थमा जनताले नयाँ शक्तिलाई विकल्पका रूपमा हेर्न सक्छन् । बाबुरामले आफ्नो छवि पनि राम्ररी निर्माण गरेका छन् । इमानदार, पढेलेखेका र काममा खट्ने नेताका रूपमा । उनी चुनिन सक्छन् तर अझै दुई वर्ष बाँकी छ । यी दुई वर्षमा माओवादी आन्दोलनका साथीहरूले केही गर्न सक्छन् तर मलाई ठूलो निराशा भइरहेको छ, खै के भनौँ ।
प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको भविष्य माओवादीका १० घटकबीच भएको एकतालाई तपाईंले नाटकीय एकीकरण भन्नुभएको किन ? साथसाथै यो एकीकरण कति प्राकृतिक र कति अप्राकृतिक हो ? तपाईंले आफ्नो प्रश्नमै यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ– कति प्राकृतिक–कति अप्राकृतिक । यो शब्द बिल्कुल सही छ । मलाई भन्न पनि सजिलो (हाँस्दै…) यो एकता निकै अप्राकृतिक देखिन्छ ।
लगत्तै भएको एकताको विरोध गर्ने तपाईं केही महिनाअघि एकता हुनुपर्छ भनेर आफैँले पहल गरिराख्नुभएको थियो होइन त ? निश्चित रूपमा मैले यो पहल गरेकै हो ।
त्यसो भए तपाईंलाई के लाग्छ प्रचण्डले कहाँबाट गल्ती गरे ? प्रचण्डले गरेको गल्तीको समीक्षा एक अथवा दुई वर्षको समीक्षा गरेर भन्न मिल्दैन । अब हामीले प्रचण्डको मूल्यांकन गर्नुपर्यो भने शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेदेखि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । आज यहाँसम्म आइसक्दा मलाई पटक–पटक २९ जुलाई २००६ मा भक्तपुरको एउटा घरमा मैले प्रचण्ड र बाबुरामको संयुक्त अन्तर्वार्र्ता गरेको सम्झन्छु । मेरो त्यो अन्तर्वार्र्ता अंग्रेजीसहित विभिन्न भाषामा छापिएको थियो किनभने त्यो अन्तर्वार्र्ता व्यापक थियो । तर, मलाई दुःख छ– प्रचण्डले जे–जे कुरा भनेका थिए, त्यसमध्ये एउटा पनि म दोहर्याएर भन्न चाहन्छु । एउटा पनि कुरालाई व्यवहारमा लागू गरेनन् ।